ဒရမ်မာထဲမှာ အယုတ်မာဆုံး ဗီလိန်​တွေဖြစ်ကြ​ပေမဲ့ လက်​တွေ့မှာ sweet ဖြစ်လွန်းတဲ့ ကိုရီးယား သရုပ်​ဆောင်များ | News Bar Myanmar
ဒရမ်မာထဲမှာ အယုတ်မာဆုံး ဗီလိန်​တွေဖြစ်ကြ​ပေမဲ့ လက်​တွေ့မှာ sweet ဖြစ်လွန်းတဲ့ ကိုရီးယား သရုပ်​ဆောင်များ
ကိုရီးယားဒရမ်မာ ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေထဲက ဗီလိန်​တွေဟာ အရမ်းကို သရုပ်​ဆောင်ပီပြင်လွန်းတာ​ကြောင့် ဇာတ်လမ်းထဲမှာတင်မက လက်​​တွေ့ဘဝမှာပါ လူမုန်းခံကြရတတ်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ အခု ၂၁ ရာစု​​မှာ​တော့ တချို့ဇာတ်ကားထဲက ဗီလိန်​တွေဟာ အဓိကမင်းသားမင်းသမီး​တွေထက်​တောင် လူချစ်ခင်တာကို ခံကြရပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဇာတ်ကား​တွေထဲမှာ အယုတ်မာဆုံး ဗီလိန်​တွေဖြစ်ကြ​ပေမဲ့ လက​်တွေ့ဘဝမှာ​တော့ စိတ်ထားကောင်းပြီး ချစ်စရာအပြုအမူ​တွေကို လုပ်တတ်ကြလို့ပါပဲ။ အဲ့လို သရုပ်​ဆောင်​တွေထဲက ၆ ​ယောက်က​တော့
မင်းသမီး Kim So Yeon ဟာ SBS ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ ‘Penthouse’ ဒရမ်မာမှာ Cheon Seo Jin ဆိုတဲ့ ဗီလိန်​ဇာတ်​ကောင်ကို သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ဒရမ်မာကလည်း ​ပေါ်ပြူလာဖြစ်သလို ထိုဗီလိန်ဇာတ်​ကောင်​ကြောင့်ပဲ မင်းသမီး Kim So Yeon ဟာ ပိုပြီး လူကြိုက်များလာပါတယ်။
ဒရမ်မာထဲမှ​တော့ သူမရဲ့ ​ကြောက်စရာ ​အေးစက်စက် အကြည့်​တွေ မျက်နှာအမူအရာ​တွေ ဒိုင်ယာ​လော့​တွေနဲ့ ကြည့်ရှုသူ​တွေကို ​အရိုးထဲထိ ကြက်သီးထ​​အောင် သရုပ်​ဆောင်ပြ​နေ​ပေမဲ့ လက်​တွေ့မှာ​တော့ သူမက တကယ်ကို sweet ဖြစ်တဲ့သူတစ်ဦးပါ။ ဒရမ်မာရဲ့ behind-the-scenes ဗီဒီယို​တွေနဲ့ variety show ​တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူမဟာ ဘယ်​လောက်ထိ ချစ်စရာ​ကောင်းတဲ့သူလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
တက်သစ်စ မင်းသမီး Han Ji Hyun ဟာ မင်းသမီး Kim So Yeon လိုပဲ ‘Penthouse’ ဒရမ်မာမှာ ဗီလိန်ကျတဲ့ Ju Seok Gayoung ဆိုတဲ့ ဇာတ်​ကောင်အ​နေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
ထိုဇာတ်​ကောင်ဟာ ဒရမ်မာထဲမှာ အ​သွေးအသားမရှိသလို ​အေးစက်စက် မာ​ကျော​ကျောနဲ့ ခက်ထန်​မောက်မာတဲ့ အထက်တန်း​ကျောင်းသူဇာတ်​ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ လက်​တွေ့ဘဝမှာ​တော့ သူမဟာ အရယ်သန်ပြီး ချစ်စရာအပြုအမူ​တွေနဲ့ ပြည့်​နေတဲ့ ၂၅ နှစ်အရွယ် ​ကောင်မ​လေးတစ်​ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား Kim Sung Oh ဟာ tvN ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ ‘L.U.C.A.: The Beginning” ဆိုတဲ့ ဒရမ်မာမှာ Lee Son ဆိုတဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့က စစ်သား​ဟောင်းဖြစ်သလို တစ်သက်တစ်ကျွန်းကျခံထားရတဲ့ ရာဇဝတ်သား​နေရာက​နေ သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။
ဒရမ်မာထဲမှာ Kim Sung Oh ဟာ ​ကြောက်စရာ မျက်နှာအမူအရာ​တွေနဲ့ သားရဲတစ်​ကောင်လို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဗီလိန်ဖြစ်​ပေမဲ့ ‘Unstoppable’ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းအတွက် မင်းသမီး Song Ji Hyo နဲ့ မင်းသားကြီး Ma Dong Seok ကို အင်တာဗျူး​မေးတဲ့အခါမှာ​​တော့ Kim Sung Oh ဟာ အစအ​နောက်သန်တဲ့သူတစ်​ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ​ပြောခဲ့ပါတယ်။
မင်းသား Kim Jae Wook ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက OCN ရုပ်သံလိုင်းက ပြသခဲ့တဲ့ “Voice” ဆိုတဲ့ စုံ​ထောက်အက်ရှင်ကားမှာ Mo Tae Gu ဆိုတဲ့ ​စိတ္တဇလူသတ်သမား​နေရာက ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ သရုပ်​ဆောင်ချက်​တွေဟာ ပရိသတ်​တွေကို ​ကျောချမ်း​စေခဲ့ပါတယ်။
သို့​သော်လည်း မင်းသား Kim Jae Wook ဟာ ‘Coffee Prince’ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက Noh Sun Ki နဲ့ ‘Her Private Life’ ဒရမ်မာထဲက Ryan Gold ဆိုတဲ့ ဇာတ်​ကောင်​တွေနဲ့လည်း မိန်းက​လေး​တွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ခိုးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒရမ်မာ​တွေရဲ့ behind-the-scenes ဗီဒီယို​တွေကို ကြည့်ရင်လည်း ကင်မရာ​ရှေ့မှာ သူ့ရဲ့ ချစ်စဖွယ် အမူအရာ​တွေကို အခက်အခဲမရှိ ပြသနိုင်တာကို ​တွေ့ရမှာပါ။
မင်းသမီး Seol In Ah ဟာ tvN ရဲ့ ‘Mr. Queen’ ဒရမ်မာမှာ Jo Hwa Jin ဆိုတဲ့ ဗီလိန်​နေရာက ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒရမ်မာထဲမှာ မိဘုရား​ခေါင်ကြီးကို မနာလိုဖြစ်ပြီး ​ချောက်ချတတ်တဲ့သူတစ်​ယောက်အဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ထားတာ​ကြောင့် ကြည့်ရှုသူပရိသတ်​တွေကို ​​ဒေါသထွက်​စေပြီး အမုန်းပွား​စေခဲ့ပါတယ်။
ဒါ​ပေမဲ့လည်း မင်းသမီး Seol In Ah ဟာ လက်​တွေ့မှာ ​ဖျော်​ဖြေ​ရေးရသ​​ကောင်း​တွေ ​ပေးစွမ်းနိုင်သူဖြစ်ပြီး ချစ်စဖွယ် အမူအရာ​တွေရှိတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ချစ်စဖွယ်ပုံစံ​တွေကို ‘Running Man’ လို variety show ​တွေမှာ ​တွေ့နိုင်ပါတယ်။
သရုပ်​ဆောင် Lee Hong Nae ဟာ OCN ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ ‘The Uncanny Counter’ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Ji Chung Sin ​နေရာက သရုပ်​ဆောင်ထားပါတယ်။ Ji Chung Sun ဟာ မ​ကောင်းဆိုးဝါး ဝင်ပူးခံထားရပြီး လူ​တွေရဲ့ ဝိညာဉ်​တွေကို နုတ်ယူစားသုံးတတ်တဲ့ စွမ်းအားရှိတဲ့ လူတစ်​ယောက်​ဖြစ်ပါတယ်။
ဒရမ်မာထဲမှာ​တော့ Lee Hong Nae ဟာ ​ကြောက်ဖို့​ကောင်းသလို ကြက်သီးထဖို့လည်း ​ကောင်းပါတယ်။ သို့​သော်လည်း ဒရမ်မာရဲ့ ရိုက်ကွင်း​နောက်ကွယ်က ဗီဒီယို​တွေ အင်တာဗျူး ဗီဒီယို​တွေထဲမှာ​တော့ သူ့ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ ပုံစံကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်​တွေက​တော့ သူ့ကို “အရှက်အ​ကြောက်ကြီးတဲ့​ကောင်​လေး” လို့ ချစ်စနိုးနဲ့ နာမည်​ပြောင်​ပေးထားကြပါတယ်။
Next ဧပြီလမှာ တစ်ကိုယ်​တော် ပွဲဦးထွက်​တော့မယ့် Red Velvet အဖွဲ့ဝင် Wendy »
Previous « "On The Ground" သီချင်းနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် music show win ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Rosé